"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : ၈၃။ Windows7မှာ Files များကို ဖြောက်နည်း နှင့် ပြန်ဖေါ်နည်း။
၈၃။ Windows7မှာ Files များကို ဖြောက်နည်း နှင့် ပြန်ဖေါ်နည်း။
Windows7မှာ အချို့သော Files များပုန်းကွယ်ပြီးပျာက်နေတာကို Avira နဲ့စစ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတပ်ပါတယ် ဒီလိုဖိုင်တွေကို မြင်ရအောင်လုပ်နည်းလေး ရှာဖွေတင်ပြလိုက်ပါတယ်၊ ဒီလို Files တွေဟာ ကွန်ပျူတာ OS ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပြဿနာဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလို Files များကို ဖျောက်ထားစေခြင်းဟာ အသုံးပြုသူကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို အချို့ Software လေးများကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစားလေးမှာ ဒီလို Files များကိုပြန်ဖေါ်နည်းလေးကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အောက်ပါတို့ကို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပါ။
Desktop မှာရှိသော Programs အားလုံးကို အရင်ပိတ်ပါ။
Start button မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ၊ Start button ဟာသင့်ကွန်ပျူတာရဲ့အောက်ဆုံးဘားတန်းဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးက Windows flag ပုံလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်လာမဲ့ ဘောင်ထဲ့မှာ Control Panel ကိုရှာပါ.
Control Panel ပုံပေါ်လာရင် အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
5. Appearance and Personalization မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ.
6. Appearance and Personalization မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီးပေါ်လာမဲ့ပုံကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
7. အပေါ်ပုံမှာ မျှားနဲ့ပြပေးထားတဲ့ Folder Option မှရှိတဲ့ Show Hidden Files And Folders ကိုရွှေးပြီးဝင်ပါ အောက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ Folder Option Box ပေါ်လာပါမယ်။
8. Hide extensions for known file types မှာရှိတဲ့ အမှန်ချစ်လေးကို ဖယ်ပြစ်ပါ။
9. Hide protected operating system files (Recommended) မှာရှိတဲ့ အမှန်ချစ်လေးကို ဖယ်ပြစ်ပါ။
အောက်ပါပုံမှာ ပြထားပေးသလို အမှန်ချစ်တွေ တူပါစေ၊ တူအောင်ထားပေးပါ။
Apply မှာအရင် ကလစ်နှိပ်ပါ ပြီးမှ OK မှာကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းကိုပြပေးပါအုန်းမယ် စဝင်ရမှာ တော့ ဘယ်ဘက်ထောင့်က Windows Start button မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ၊ Start button ဟာသင့်ကွန်ပျူတာရဲ့အောက်ဆုံးဘားတန်းဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးက Windows flag ပုံလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဒီနေရာမှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ရင် Computer မှာကလစ်ထပ်နှိပ်ပါ အောက်ပါပုံလေးကိုကြည့်ပါ ဘယ်ဘက်အထက်နားက Organize မှာကလစ်နှိပ်ပါ ကျလာတဲ့ Box လေးမှာ မျှားပြထားတဲ့ နေရာက Folder And Search Options မှာကလစ်နှိပ်ပါ ဒါဆိုရင် Folder Option Box ပေါ်လာပါမယ် ကျန်တာကတော့ အထက်မှာပြပေးထားတဲ့နည်း အတိုင်း အားလုံးအတူတူပါဘဲ ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Windows7နှင့်ပါတ်သက်လို့ အမေးဖြေလုပ်စရာရှိရင် ဒီမှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် မြန်မာပြန်ဝက်ဆိုဒ်တော့မဟုတ်ပါဘူး Windows7forums.